२०७६ माघ, १७
डा. वासुदेव पाण्डे, निर्देशक, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल
१ महीनाअघि चीनको वुहान शहरमा पछिल्लो समय भयावहको रूपमा देखिएको कोरोना भाइरसका संक्रमणका बिरामी हाल नेपालसहित १२ ओटा देशमा देखिएका छन् । नेपालमा पनि चीनबाट फर्किका एक विद्यार्थीमा यसको संक्रमण देखिइसकेको छ । चीनमा यसको संक्रमणबाट बिहीवारसम्ममा १७० जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमध्ये दोस्रो स्थानमा चिनियाँ छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० चलिरहँदा यसले नेपालमा पर्यटन आगमन समेत घटाउन सक्ने देखिएको छ । प्रस्तुत छ, कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने अवस्था, बच्ने उपाय लगायत विषयमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. वासुदेव पाण्डेसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :
छिमेकी मुलुक चीनमा महामारीको रूपमा देखिएको कोरोना भाइरसको जोखिम नेपालमा कत्तिको छ ?
पछिल्लो समय नयाँ नयाँ रोग तथा विभिन्न भाइरसको संक्रमण देखिन थालेको छ । पहिले देखिएका रोग नै पछि महामारी बन्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा गतवर्ष देखिएको स्वाइनफ्लूको एचवनएनथ्री भाइरस, असार साउनमा मात्रै देखिएको डेंगी यसका उदाहरण हुन् । कोरोना भाइरस पनि आजभन्दा ६० वर्ष अघि पत्ता लागेको थियो । यो भाइरस ८ वर्षअघि पनि भयावहको रूपमा देखिएको थियो । यो भाइरसका विभिन्न प्रकार हुन्छन् । त्यतिबेला यसले ८ सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । अहिले देखिएको नोभल कोरोना भाइरस हो । यो पहिलेको भाइरस जति खतरनाक नभएको चीनले बताएको छ । चीनमा महामारीको रूपमा फैलिएको यो भाइरसबाट नेपालमा डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालले विमानस्थलमै यसबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाइसकेको छ ।
कस्तो सतर्कता अपनाइएको छ त ?
चीनमा मानिसबाटै मानिसमा यो भाइरस सरेको भेटिएको छ । तर अन्य कुनै पनि मुलुकबाट यो भाइरस मानिसबाट मानिसमा सरेको छैन । अहिले विमानस्थलमै लेजर स्क्यानरबाट यात्रुको जाँच गर्ने गरी पूर्वतयारी अपनाइएको छ ।
तर शुरुआती अवस्थामा कुनै लक्षणविना नै यसको संक्रमण हुन सक्छ भनिन्छ नि ?
हो, यो भाइरसको संक्रमण हुँदा केही दिनसम्म कुनै लक्षणै पनि नदेखिन सक्छन् । हाल चीनमा यो भाइरस भयावहकै रूपमा फैलिरहेको छ ।
नेपालमा सामान्य सतर्कता अपनाउने हो भने पनि यसबाट बच्न सकिने अवस्था छ । चिसो मौसममा यसको संक्रमण देखिएकोमा अबको १/२ सातापछि यो घट्दै जान्छ र केही दिनपछि अवस्था सामान्य हुन्छ । उताबाट आउने बिरामीलाई कतिबेला भाइरस देखिन्छ भन्ने यकिन हुन नसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
यो भाइरसको संक्रमण हुँदा कस्ता लक्षण देखिन्छन् ?
यो मानिस र जनावर दुवैमा देखिने भाइरस हो । अत्यधिक टाउको दुख्नु, उच्च ज्वरो आउनु, श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ हुनु, घाँटी दुख्नु, छातीको दुवैतिर निमोनिया देखिनु आदि यसका लक्षण हुन् । यस्ता लक्षण देखिएमा यस भाइरसको शंका गरेर सचेत हुनुपर्छ । सामान्यतया रुघाखोकीमा देखिएजस्तै लक्षण यसमा देखिन्छन् ।
यसको जोखिम कसलाई हुन्छ ?
वृद्ध, बालबालिका र औषधि सेवन गरिरहेका वा प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर भएका मानिसमा यसको सम्भावना बढी हुन्छ । यसकारण यस्ता मानिसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
यो भाइरस कसरी सर्छ ?
मान्छेमा मान्छेबाटै यो रोग सर्ने सक्ने सम्भावना न्यून हुने भनिएकोमा चीनमा मान्छेबाटै मान्छेमा यो सरेको भेटिएको छ । यसकारण सामान्य रुघाखोकी जस्तै गरी श्वासप्रश्वासबाट यसको संक्रमण हुन सक्छ ।
यो रोगबाट कसरी बच्ने ?
सर्वप्रथम त सबैले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्‍यो । यसैगरी रुघाखोकीका बिरामीसँग सकभर सम्पर्कमा आउन हुँदैन । यस्तै जनावरबाट टाढा बस्ने, खोक्दा, हाच्छ्युँ गर्दा रुमालले मुख छोप्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, मासु राम्रोसँग पकाएर खाने, सकभर भीड भएको ठाउँमा नजाने गर्दा यसबाट बच्न सकिन्छ । यसैगरी यसका लक्षण देखिएमा नजीकको स्वास्थ्यचौकीमा सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
लक्षणअनुसार यसको उपचार हुन्छ । यो भाइरसको कारण निमोनियाको सम्भावना उच्च हुन्छ । निमोनिया भएमा एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ भेन्टिलेटरमा राखेर पनि यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसरी रोगसँग लड्ने क्षमताको वृद्धि भई बिरामी निको हुन्छ । यसकारण ज्वरो आउँदा ज्वरोको, निमोनिया हुँदा निमोनियाको र अन्य लक्षण देखिएमा अन्यको उपचार गरिन्छ ।
तत्काल निको भएको जोर्नीको समस्या कालान्तरमा देखिन सक्छ[२०७६ फागुन, ९]
कोराना भाइरसको मुल स्रोत के हो ? अझै पनि शंकास्पद[२०७६ फागुन, ५]
शल्यक्रियाबाट पिसाबनली सम्बन्धी रोगको पूर्ण उपचार हुन्छ[२०७६ फागुन, २]
कोरोना भाइरसबाट आत्तिइहाल्नुपर्ने खतरा छैन[२०७६ माघ, १७]
कोरोना भाइरस : नआत्तिन र उच्च सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव [२०७६ माघ, १३]
तस्वीर : डुङ्गा दौड प्रतियोगितामा सहभागी युवा
आज महाशिवरात्रि : शिवालयमा भक्तजनको भीड, डेढ लाखबाट पशुपतिको दर्शन
तस्वीर : रानीपोखरीमा ‘डिप बोरिङ’ गर्दै मजदूरहरू
तथ्यांकोवाच : दूरसञ्चार, कम्प्युटर र सूचना सेवाको विश्व आयात ३ खर्ब ४९ अर्ब डलरको
विराट एक्स्पो २०७६ : घरेलु उत्पादनमा उपभोक्ताको भीड